अभिमत: प्रचण्डकि नातिनीलाई मन परेन आफ्नै बाजेको विचार
प्रचण्डकि नातिनीलाई मन परेन आफ्नै बाजेको विचार
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दश वर्ष जनयुद्ध गरे बन्दकको बलमा । अनि हरेक नागरिकको हातमा बन्दुक भएमात्रै देशमा दीर्घशान्ति आउने बताउदैछन् । लाग्छ उनी विश्वकै युद्ध नायक हुन् । यसैले उनलाई बन्दुकको मोहले बेसरी च्यापेको छ । अनि देश परिवर्तनका लागि नैपालका सबै संरचना बदल्नपर्ने उनको भनाई पनि छ । चन्द्रसुर्य अंकित नेपालको राष्टिय झण्डा बदल्नुपर्छ भन्ने अभियानमा प्रचण्ड लागेका छन् । तर आफु जीवित छदै उनको तेश्रो पुस्ताले यो करा मान्न तयार छैन । झन्डा फाल्न खोज्ने आफ्नो बाजेको पार्टीको निर्णयलाइ गतिलो झापड लगाएकी रहिछिन !
तर भविष्यका पुस्ताले झन् प्रचण्डकौ युद्ध मोहलाई कसरी समर्थन गर्ला खै ?उनकै सहोदर नातिनीले गाएको यो राष्टिय गीतले प्रचण्डलाई नै नराम्ररी झापड हानेको छ । प्रचण्डकि छोरीकि छोरी स्मिताले नेपाललाई के भयो भनेर गाएको गीत तपाई पनि हेर्ने कि ? काठमाडौंको हनुमान ढोका संग्राहालय परिसरमा पहिलोपटक छायांकन गरिएको म्युजिक भिडियो हो यो ।
नातिनी ले हजुरबालाई प्रश्न गरेको जस्तो छ ,के नेपाली जनताले आशा गरेको नेपाल येही हो भनेर? देशलाई माया गर्छु भन्ने तिमीहरुले माया गरेको खोइ येही हो भनेर ? अब हजुरबा ले के जवाफ दिने हुन , त्यो हेर्न पाए चै गजब हुने थियो
Prabesh December 2, 2009 at 2:54 PM
मलाई त एकदम मनपर्‍यो यो गीत...हजुरबाभन्दा धेरै कुरा बुझ्ने रै'छिन् नातिनि...